दूई दाजुभाईको मृ'त्यु प्रकरणमा २ महिना अघि बिवाह भएकी श्रीमतीलाई किन लगाईयो दो'ष ? - Onlines Time
दूई दाजुभाईको मृ’त्यु प्रकरणमा २ महिना अघि बिवाह भएकी श्रीमतीलाई किन लगाईयो दो’ष ?
November 10, 2020 onlinestimeLeaveaComment on दूई दाजुभाईको मृ’त्यु प्रकरणमा २ महिना अघि बिवाह भएकी श्रीमतीलाई किन लगाईयो दो’ष ?
नवलपरासी घटनामा श्रीमान गु’माएकी विजयबाबु पौडेलकी श्रीमतीलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले नाना थरीका गा ‘ली गरेपछि उनलाई त्यसो नगर्न उनका आफन्तले सुझाव दिएका छन् । एक मिडियामा विजयबाबुका बहीनी ज्वाईले दिदीलाई कसैले पनि यस्तो काम नर्गन र नराम्रो कमेन्ट नलेखिदिन आग्रह गरेका छन् ।
निकै अप्ठेरो ठाउँमा रहेको पोखरीमा दुई जना मात्र जान नसक्ने भन्दै उनीहरुको ज्या’न लि’इ’एको हुनसक्ने आशंका परिवारको छ । घटनास्थलको अवस्था र छोराहरुको स्वभावलाई लिएर परिवारले घटनास्थल रहस्यम भनेका छन् । परिवारका सदस्यको चाहना अनुसार पोष्टमार्टम पनि दुई पटक गरिने भएको छ । कतिपय घटनामा पोष्टमार्टम रिपोर्ट सहि नआएको उदाहरुण आफुहरुले देखेका कारण दोस्रो पटक पनि पोष्टमार्टम गर्न आग्रह गरिएको बुवाले बताएका छन् । पोष्टमार्टम पछि विजय र संगमको शव घरको आगनबाट उठाएर अन्तिम संस्कारको लागि लाँदै गर्दा सिंगो गाउँ सोकमा डुबेको थियो भने त्यहाँ भेला भएका आफन्त र गाउँलेको आँखामा आशु देख्न सकिन्थ्यो । etajakhabar बाट साभार
३ दिनमा नै पुरानो दादलाई चैट पार्ने चमत्कारिक घरेलु औषधीको बारेमा पद्नुस । जानकारीकाे लागि सेयर गराै
काठमाण्डौंमा एकाएक बाढी आयो, बागमती किनारका यी बस्तीमा पस्यो पानी, सु’कु’म्बासी बस्तीको घर लग्यो (भिडियो हेर्नुहोस)
नेपाली चेलीलाई कुवेतमा साहुनीले आइरनले डाम्दै यसरी राखेकिछिन्,नेपाली चेलीको मननै रु वाउने कहा’लीलाग्दो कथा (भिडियो हेर्नुस्)